Banyere anyị - SHANDONG HONOR SHINE GROUP
Dabere na mkpokọta ahịa na ahụmịhe ahịa anyị, ugbu a anyị bụ ndị na -ere SinoTruck, Foton Truck na XCMG igwe, na -enye otu usoro usoro ọrụ zuru oke maka ihe ndị ahịa chọrọ!
Ebube nsọpụrụ na-ewukwa otu netwọkụ ahịa na ọrụ ọrụ, anyị nwere ọdụ ọrụ na ụlọ nkwakọba ihe n'ọtụtụ mba, dịka na Philippines, Indonesia, Ghana na ndị ọzọ, anyị nwekwara awa 24 ka onye ọrụ nyere otu ahịrị nke nwere ike inyere gị aka idozi ajụjụ a. ma ọ bụ nsogbu n'ime awa 24 n'oge ọ bụla!
Anyị na -anọgide na -enwe usoro mmepe ngwa ngwa, anyị nwere olile anya nwere ike rụọ ọrụ na ọtụtụ ndị ahịa na ndị enyi n'ụwa niile!
Sọpụrụ Nkwa Nkwa
Anyị ga -enyere gị aka ịhazi nkọwa zuru oke na ezi uche dị ka ihe ị chọrọ si dị, họrọ ngwaahịa kacha adabara gị.
Na -akwanyere nkwekọrịta ahụ ùgwù, na -ejikwa ịdị mma ngwaahịa na nkọwa ya.
Mgbe ọrụ gasịrị
Ọrụ awa 24 n'ahịrị, nwere ike ịzaghachi ihe ndị ahịa chọrọ n'oge.
Akwụkwọ ikike: akwụkwọ ikike ọnwa iri na abụọ maka ngwaahịa a, Anyị ga -arụzi ma ọ bụ dochie akụkụ nwere nkwarụ n'efu ma ọ bụrụ na ihe ma ọ bụ ntụpọ usoro emee ma akụkụ ahụ mapụtara nọ n'ọnọdụ ọrụ nkịtị.
Akụkụ mapụtara: Anyị na -edobe ngwa ahịa zuru oke n'ụlọ nkwakọba ihe anyị, nwere ike ịnye ngwa ahụ ngwa ngwa na n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Nwụnye, mmezi na ọzụzụ: Anyị nwere ọfịs na ọdụ ọrụ n'ọtụtụ mba, nweekwa ndị injinia ọkachamara nwere ike inyere gị aka ịme nrụnye ma ọ bụ ndozi n'oge dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Nye anyị otu ohere, anyị ga -enye gị nnukwu ihe ịtụnanya